အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထိရောက်စွာခြေရာခံရန် Martech Zone
အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ယခင်ကကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်များစွာသောစျေးကွက်သမားများကသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်ခြေရာခံရန်ပျက်ကွက်နေကြသည်။
၂၁ ရာစုအတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်ကအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သို့သော်လူမှုမီဒီယာ၊ SEO၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေမှုများတလျှောက်လုံးတွင်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အစားအစာကွင်းဆက်တွင်အမြဲရှိနေခဲ့သည်။ တကယ်တော့, စျေးကွက်၏ 73% အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများဖန်တီးရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ဆဲဖြစ်သည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: လေပြေ
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ပိုမိုသိရှိရန်ပိုမိုအားကောင်းစေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအီးမေးလ်အခြေပြုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ကြိုက်ခံစားချက်များဖြင့် ဦး ဆောင်သူများထံမှသစ္စာရှိမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြားတွင်ဂရုစိုက်တတ်သော၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းပိုမိုမြင့်မားလာစေနိုင်သည့်ဂရုစိုက်တတ်သော၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုပြသနိုင်သည့်ပတ္တူတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မကြာမီက အော်ဂဲနစ်လက်လှမ်းမမီအတွက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တန်ဖိုးကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သူတို့၏စာပုံးများအတွင်းလက်ခံသူများရှေ့တွင်တိုက်ရိုက်ပေါ်လာခြင်းဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအကြားပိုမိုခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးအကူအညီအထောက်အပံ့များကတန်ဖိုးထားခံရသည်ဟူသောခံစားမှုကသူတို့ ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာတွေ့စေသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသံသယအနည်းငယ်သာရှိသော်ငြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အီးမေးလ်စွမ်းအားကိုဖောက်သည်အများစုထံရောက်ရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ စျေးကွက်သမားများကအီးမေးလ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခြေရာခံ။ သူတို့၏မဟာဗျူဟာများကိုအရောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးနည်းစနစ်အချို့ကိုလေ့လာသင့်သည်။
အကယ်၍ စျေးကွက်သမားများကသူတို့၏ပြောင်းလဲမှုများကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းမရှိပါကအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အနည်းငယ်သာထိုက်သည်။ သင်၏စာပို့စာရင်းသို့စာရင်းပေးသွင်းထားသူအရေအတွက်ကွဲပြားမှုသည်သင်မည်သူမဆို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုလိုက်နာရန်မတတ်နိုင်ပါကအနည်းငယ်သာဆိုလိုသည်။
သင်၏လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများပိုပြီးအသီးကိုသီး, သင်ရရှိနိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ကြွယ်ဝမှုအချို့ကိုအသုံးချရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏စမ်းသပ်မှုအချို့ကိုစတင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် split split စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သင်၏ရှိပြီးသားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များနှင့်ကိုက်ညီသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုသင်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေပါကပျက်ကွက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်၏နိမ့်ကျသောအဆင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ အီးမေးလ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အဆင့်မြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်။ MailChimp နှင့် Constant Contact ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်အထူးသဖြင့်စျေးကွက်သမားများကတည်ဆောက်နိုင်သည့်မက်ထရစ်များကိုပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အီးမေးလ်ဖွင့်နှုန်း၊ ကလစ်နှိပ်နှုန်းနှင့်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုခံယူသူများ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအမျိုးမျိုး။ ဒီထိုးထွင်းသိမြင်မှုတွေကသင့်ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာပါတဲ့ပြyourနာတွေကိုပိုမြန်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်ထဲကအတော်အတန်အပိုင်းအခြားတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Image ကိုရင်းမြစ်: Software ကိုအကြံဥာဏ်
ဖြစ်နိုင်သည်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာ 'click the tracking' ဟုခေါ်သည်။ ၄ င်းသည် embedded email link တစ်ခုမှသင်၏ website သို့ရောက်သောအခါအသုံးပြုသူများ၏လမ်းကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကလစ်နှိပ်ခြင်း၏ကျော်လွန်ခြင်းမှတစ်ဆင့်အီးမေးလ်များကိုကလစ် နှိပ်၍ ကြိုဆိုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများမှအသုံးပြုသူများ၏တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုခြေရာခံရန်ရည်ရွယ်ပါကအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရွေးချယ်မီလုံလောက်သောသုတေသနပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သူတို့ပေးသောကလစ်တစ်ချက်ကျော်လွန်သည့်အဆင့်ကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကူညီသည်။ ထူးခြားသည်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများကိုခြေရာခံခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းအချက်များနှင့်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုအလိုအလျောက်အမှတ်အသားပြုခြင်းစသည့်အချက်များသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများရရှိရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြောင်းလဲခြင်း optimization.
စီးပွါးရေးအသွားအလာများနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအရင်းအမြစ်များကိုခြေရာခံရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပလက်ဖောင်းအချို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့နိုင်သည် Google Analytics နှင့် Finteza - နှစ် ဦး စလုံးအသွားအလာနှင့်အကြီးအကျယ်အာရုံစိုက်နှစ်ခုလုံးသော UTM ခြေရာခံခြင်း.
Image ကိုရင်းမြစ်: Finteza
Google Analytics ထက်အီးမေးလ်အသွားအလာကိုခြေရာခံရန်ပိုမိုထိရောက်သောအရင်းအမြစ်များရှိသေးသည်။ ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏အီးမေးလ်အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည် ထုံးစံအဆင့်မြင့် segments များတည်ထောင်ခြင်း ပရိသတ်များမည်သို့ပြုမူသည်ကိုတိကျစွာခြေရာခံရန်၎င်းသည်အီးမေးလ်လင့်များမှ visitors ည့်သည်များအားအထူးလိုက်နာနိုင်သည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics တွင်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဇယားကွက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းအတွင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင်ရွေးရန်လိုအပ်သည် ပရိသတ်များအတွက် ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ option ကို။ အီးမေးလ်ရောက်ရှိမှုကိုခြေရာခံရန်ရွေးချယ်နေစဉ်ပရိသတ်အသစ်ကိုဖန်တီးရန်ထို option ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
သင်ဖန်တီးထားသောအစိတ်အပိုင်းများအားအခြေအနေအချို့ကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်လိမ့်မည်။ အကျဉ်းချုပ်သည်သင်သတ်မှတ်ထားသောမာဂျင်များနှင့်သင်ရင်ဆိုင်ရမည့်သင်၏ visitors ည့်သည်များ၏အရွယ်အစားရာခိုင်နှုန်းကိုညွှန်ပြပေးလိမ့်မည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလာသည် ခြေရာခံစနစ်များကိုဖန်တီး၏ပုံစံ၌တည်၏ မည်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသိရှိရန်သင့်အားကူညီရန်။
သင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုထိရောက်စွာခြေရာခံနိုင်ရန်သင်၏အီးမေးလ်အတွင်းရှိ embedded links များသည်အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံသည့် parameters များကို tagged landing စာမျက်နှာများသို့ညွှန်ကြားသင့်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော parameters တွေကိုဖော်ထုတ်လွယ်ကူခြင်းအဘို့အသက်ဆိုင်ရာ 'name- တန်ဖိုး' 'အားလုံးအတွက်စီးရီးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က '?' အောက်ပါမည်သည့်စာသားကိုမဆိုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် URL တစ်ခုအတွင်း။
Image ကိုရင်းမြစ်: Hallam အင်တာနက်
အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် URL လိပ်စာအမျိုးမျိုးနှင့်မည်သို့သော tagging အလုပ်လုပ်ပုံကိုရည်ညွှန်းသည့်ဥပမာများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ အမှု၌သင်မည်သည့်အကြိမ်ရေစဉ်းစားခဲ့ကြသည် UTM အပေါ်ကဥပမာမှာပေါ်လာတာအတိုကောက်ပဲ Urchin ခြေရာခံခြင်း module.
သင်၏ဂူဂဲလ် Analytics အားသင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်သင်၏ရွေးချယ်မှုပလက်ဖောင်းအဖြစ်သင်ရွေးချယ်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းဖို့သေချာပါစေ Martech ZoneGoogle Analytics Campaign တည်ဆောက်သူ အမျိုးမျိုးသောအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှတဆင့်ပြန်သွားသောသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမျက်နှာများအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုစျေးကွက်သမားများကထည့်သွင်းနိုင်သည်
Google Analytics UTM ကမ်ပိန်း URL တည်ဆောက်သူ
အကယ်၍ သင်သည်အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ် အခြေခံ၍ ထုတ်လွှင့်သောသတင်းလွှာကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေပါကလွယ်ကူစွာကိုးကားနိုင်ရန်အလွယ်တကူထည့်သွင်းထားသောလင့်ခ်များပါသည့် HTML စာမျက်နှာကိုဖန်တီးသော script တစ်ခုကိုရေးသားသင့်သည်။ များစွာသောအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ESPသင်အလိုအလျောက်လုပ်နိုင်သောဘက်ပေါင်းစုံ UTM ခြေရာခံခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ပလက်ဖောင်းသို့မ ၀ ယ်မီပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှကမ်းလှမ်းသောအင်္ဂါရပ်များကိုလေ့လာခြင်းသည်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်ကြောင်းသတိရပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အပြည့်အ ၀ မကိုက်သောအရာတစ်ခုသို့ ၀ ယ်ခြင်းသည်မလွှဲမရှောင်သောဘဏ္financialာရေးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အီးမေးလ်ဖွင့်နှုန်းနှင့် click-through metrics ကိုကြည့်ရုံမျှနှင့်စျေးသည်များသည်သူတို့၏ပြောင်းလဲမှုများကိုအပြည့်အ ၀ စောင့်ကြည့်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်ဆက်စပ်သောအစစ်အမှန် ROI ကိုနားလည်ရန်အသုံးဝင်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်၎င်းတို့ပေးပို့သောအီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုရန်စိတ်အနှောင့်အယှက်မည်မျှရှိသည်ကိုစစ်ဆေးရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အခြေခံအချက်အလက်များစွာရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့လက်ခံရရှိသည့်အီးမေးလ်များသည်အီးမေးလ်ထဲသို့ ၀ င်လာပြီးနောက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဤမက်ထရစ်များစွာ စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့မြင်တွေ့ရသောလှုပ်ရှားမှုများအားသူတို့မြင်တွေ့ရသောလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်မည်ကိုအပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုမပေးနိုင်ပါ လေ့လာရန်ရရှိနိုင်.
ဤအချက်အပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်, ကလစ် - မှတဆင့် - နှုန်းထားများညွှန်ပြနိုင်ပါတယ် လက်ခံသူသည်သင်၏ကုမ္ပဏီမှအီးမေးလ်တစ်ခုဖွင့်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့် link တစ်ခုသည်လုပ်ဆောင်မှုပြုနေသော်လည်း၎င်းသည်ပြောင်းလဲမှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဟုအမြဲမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့၊ ကန့်သတ်ဖြတ်ပိုင်းများ၏ပမာဏသည်သုံးစွဲသူများအတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခွင့်အလမ်းပင်ရှိသည် မှာယူမှုဖျက် မေးလ်စာရင်းမှ။
Image ကိုရင်းမြစ်: ကင်ပိန်းု့ကပ်ရေး
Campaign Monitor သည်၎င်း၏ကလစ်နှိပ်ဖွင့်နှုန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။CTORနောက်ထပ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက၎င်း၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏စွမ်းဆောင်ရည်သို့လက်ခံရရှိနိုင်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထွန်းလင်းပေးသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လက်ချင်း တွဲ၍ သွားသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်တစ်ယောက်သည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းပြသခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းကြားတွင်အလုပ်များစွာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ စျေးကွက်သမားများကိုမျက်ခြည်မပြတ်ရန်အရေးကြီးသည် တန်ဖိုးထည့်သွင်းမိတ္တူ အရောင်းသတင်းကိုချရန်အထိရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသောမက်ထရစ်များအကြား။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်နည်းပညာပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အသစ်များပိုမိုအခိုင်အမာထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကြားတွင်ဟောင်းနွမ်းသောအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုလုံးသည်မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောအင်အားတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။ မှန်ကန်သောသုတေသနပြုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့်စျေးကွက်သမားများသည်အောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့၏အလားအလာကိုအများဆုံးအသုံးချကာငွေကြေးစုဆောင်းရန်အလားအလာရှိသည်။ သူတို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသူတို့၏အရောင်းကောင်မလေးများပေးသောစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Tags: ကင်ပိန်းု့ကပ်ရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး urlနှုန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါကလစ်နှိပ်ပါ -to- ပွင့်လင်းမှုနှုန်းပြောင်းလဲခြင်း optimizationctorအီးမေးလ်ပရိသတ်များအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအကြောင်းအရာအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမည်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအရင်းအမြစ်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသက်တမ်းအီးမေးလ်ကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းအီးမေးလ်ကူးပြောင်းမှုနှုန်းအီးမေးလ်ပြောင်းခြင်းအီးမေးလ် ctrအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိသတ်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြန်လာအီးမေးလ်စျေးကွက် roiအီးမေးလ်ဖွင့်နှုန်းအီးမေးလ် roiအီးမေးလ်အပိုင်းအီးမေးလ်ခြေရာခံလင့်များအီးမေးလ်ကိုဖျက်သိမ်းနှုန်းfintezaGoogle Analytics dashboardGoogle Analytics UTM ကင်ပိန်းတည်ဆောက်သူHostGatorအီးမေးလ်လင့်များကိုကုဒ်ဘယ်လိုအီးမေးလ်ပြောင်းလဲမှုများကိုမည်သို့ခြေရာခံရန်အီးမေးလ်ရောင်းအားကိုခြေရာခံရန်mailchimpပွင့်လင်းမှုနှုန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါsemrushsoftware အကြံဥာဏ်အီးမေးလ်ပြောင်းလဲမှုများကိုခြေရာခံurchin ခြေရာခံခြင်း moduleutm querystringutm tracker ပါutm ခြေရာခံခြင်းutm_campaignutm_ အကြောင်းအရာutm_mediumutm_sourceutm_term
Dmytro သည် Solvid မှ CEO ဖြစ်ပြီး Pridicto ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူ၏အလုပ်ကို Shopify, IBM, Entrepreneur, BuzzSumo, Campaign Monitor နှင့် Tech Radar တို့တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
10:2021 pm မှာဇွန် 4, 36
သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းသည်ပရိသတ်ကိုသိကျွမ်းရန်၊ အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုတည်ဆောက်ရန်၊ အဘယ်အရာကိုမဖယ်ရှားရန်နှင့်မဟာဗျူဟာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အဆုံးစွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌သင်အင်ဖိုအတွက်ပေးသည့်နည်းလမ်းကိုနှစ်သက်သည်။ လာလိမ့်မည်၊ ဖတ်ရှုမည့်သူသည်ဤမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သေချာသည်။